समाचार - २० वटा शहरी मूर्तिहरूमध्ये कुन बढी रचनात्मक छ?
प्रत्येक शहरको आफ्नै सार्वजनिक कला छ र भीड भवनहरूमा शहरी मूर्तिकलाहरू, खाली ल्यान र सडक पार्कहरूमा, शहरी परिदृश्यलाई भीडमा बफर र सन्तुलन प्रदान गर्दछ। तिमीलाई त्यो थाहा छ यी २० शहरका मूर्तिकलाहरू उपयोगी हुन सक्छन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई भविष्यमा स .्कलन गर्नुभयो भने।
को मूर्तिकलाहरु को “ प्रकृति को शक्ति ”In विश्वका प्रमुख शहरहरू डिजाइन गरिएका थिए इटालियन कलाकार लोरेन्जो क्विन द्वारा। क्विन तुफान पछि पृथ्वीको वातावरण को विनाश बाट प्रेरित थियो, र कांस्य, स्टेनलेस स्टील र एल्युमिनियम बनायो। मूर्तिकलाहरु मा “ प्रकृति को शक्ति “ श्रृंखला । यो लन्डनमा "प्रकृति को शक्ति" हो।
फ्रान्सेली कलाकार ब्रुनो क्याटालानोले मार्सिलेज, फ्रान्समा लेस भ्वाएजर्स (लेस भोएजर्स) बनाए। यस मूर्तिले मानव शरीरका महत्त्वपूर्ण भागहरू लुकाउँछ, र यस्तो लाग्दछ कि तिनीहरू भर्खर एक समयको सुरुnel भएर गएका छन्, र हराएको अ just्गले मात्र मानिसहरूलाई ब्यूँझाउँदछ कि प्रत्येक यात्रीले आफ्नो घर छोड्दा निश्चित रूपमा कल्पनाको लागि ठूलो कोठा छोड्दछन्। र मूर्तिकलाको हराएको भागले आधुनिक व्यक्तिहरूको बेवास्ता गरिएको हृदयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ?
चेक मूर्तिकार जारोस्लाव रानाले डिजाइन गरेको काफ्काको मूर्ति काफ्काको पहिलो उपन्यास "अमेरिका" (१ 27 २27) मा आधारित छ। एक जुलुसमा, राजनीतिक उम्मेदवार विशालको काँधमा सवार हुन्छ। २०० 2003 मा यो मूर्ति प्रागको Dusny Street मा सम्पन्न भयो।
अधिकांश लुइस बुर्जुवा (१ 11 ११-२०१०) का कामहरू ईर्ष्या, क्रोध, डर र उनको आफ्नै पीडादायी बचपनलाई कामहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक आँखामा ल्याउँदछन्। “मामान” (स्पाइडर) बिलबाओ, स्पेनमा गुग्नेहेम संग्रहालयको अगाडि। यो -० फिट अग्लो माकुरो उनको आमाको प्रतीक हो। उनको विश्वास छ उसकी आमा चतुर, बिरामी र माकुरो जस्तै स्वच्छ छ।
बेलायती कलाकार अनीश कपूरले डिजाइन गरेको क्लाउड गेट ११० टन अंडाकार मूर्तिकला हो, यसलाई प्राय: पोड पनि भनिन्छ, यो शिकागोको मिलेनियम पार्कमा अवस्थित छ। तरल पाराबाट प्रेरित, मूर्तिकला feet 66 फिट लामो र feet 33 फिट अग्लो छ। यो शिकागोको प्रसिद्ध शहरी मूर्तिकला हो।
२०० 2005 मा, बुडापेस्टको डेन्यूबको पूर्वी किनारमा, फिल्म निर्देशक क्यान टोगे र मूर्तिकार ग्युला पउरले सन्‌ १ 194 44 देखि १ 45। Hundreds सम्म सयौं हंगेरी यहूदीहरूको नरसंहारको स्मरणार्थ "शूज बाय डेन्यूब" बनाए। नरसंहार हुनु अघि यहूदीहरूले आफ्ना जुत्ताहरू नदीको किनारमा राखे तर बन्दुकको गोली लागे पछि त्यो शरीर सिधै डान्यूबमा रोपियो।
नेल्सन मण्डेला को छवि राम्रो चिनिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा होविकको नजिकको मूर्ति दक्षिण अफ्रिकी कलाकार मार्को सियानफनेल्लीले बनाएको हो।
फिलाडेल्फिया सिटी हल नजिकै स्वीडेनको मूर्तिकार क्लास ओल्डेनबर्गले डिजाइन गरेको कपडास्पिन मूर्तिकला।
"डिजिटल डग्का" (डिजिटल डग्का) सुन्दर वा अनौंठो छ, यो सबै भ्याकूवरमा साइप्रस पार्कको बन्दरगाह र पहाडहरूलाई हेरेर छ। यो मूर्तिकला इस्पात आर्मेचर, एल्युमिनियम क्लेडि and र कालो र सेतो घनबाट बनेको छ, यसले पर्यटक र स्थानीयहरूलाई फोटो लिनको लागि राम्रो ठाउँ बनाएको छ।
बेलुन फूल (रातो) न्यू योर्क शहरको नयाँ विश्व व्यापार केन्द्रमा सेट गरिएको छ।
रोबर्ट ग्लेनले बनाएको लास भेगासमा जंगली घोडाहरूको काँसाको मूर्तिले पानीमा नौ वटा जंगली घोडाहरूको स running्केत देखाउँछ।
अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा नेशनल लाइब्रेरीको अगाडि रहेको शिल्पकृतिले सभ्यताको पतन र एकै साथ वास्तविकताको छोटोतालाई पनि संकेत गर्दछ।
"दि नट्ड गन" न्यू योर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय नजिकै अवस्थित छ। यो मूर्तिकलाले अहिंसक संसारको आशालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो धातु हेड स्थापना प्रागमा अवस्थित छ र डेभिड सिनीको कार्यहरू मध्ये एक हो। यस मूर्तिकला बीचको भिन्नता यो हो कि यसले इन्टरनेट मार्फत सबै स्टेनलेस स्टील लेयरहरूलाई degrees 360० डिग्री घुमाउन सक्छ, र कहिले काँही पigned्क्तिबद्ध गर्दा, ठूलो टाउको सिर्जना गर्न सकिन्छ। काम भनेको कलाको साथ मेकानिकल नियन्त्रण र कम्प्युटर टेक्नोलोजीको कलाकारको एकीकरण हो।
फिलाडेल्फियाको यो बीस फुट लामो मूर्तिले कलाकारलाई कस्तो किसिमको सोचाइ दिन्छ? सबै अवरोधहरूबाट छुटकारा पाउनुहोस्, हामीले ...
मूर्तिकला केन्द्र Pompidou संग्रहालय आधुनिक कला को बाहिर स्थित छ। फ्रान्सेली कलाकार सेसर बाल्ड्याचिनी द्वारा डिजाइन गरिएको, यसले आफ्नो मनपर्ने विषयवस्तुहरू मध्ये एक हो, मानव, जनावर र कीराहरूको कल्पना प्रतिनिधित्व।
ह Hungarian्गेरी कलाकार इर्विन लोरन्थ हर्वेले बनाएको विशाल लन उठाइएको छ र विशाल मूर्तिहरू भुइँबाट माथि उक्लिएको देखिन्छ। मूर्तिकला बुडापेस्ट आर्ट मार्केट बाहिर अवस्थित छ।
अल्बर्टाको सपना स्पेनी कलाकार जउमे प्लेन्सेको मूर्तिकला हो। यो काम अत्यधिक राजनैतिक छ, र यसको वास्तविक अर्थमा धेरै व्यक्तिको फरक मत छ। यद्यपि यो यही हो जुन प्लेन्साको कलालाई विशेष बनाउँदछ, किनकि यसले एक संचारलाई प्रेरित गर्दछ जुन पहिले अवस्थित छैन।
सिंगापुरका मूर्तिकार चong्ग फाह चेओong (चिनियाँ नाम: झाhang हुआचांग) को काम। शिल्पकारले केटाहरूको समूहले सिंगापुर नदीमा उफ्रिने क्षणलाई चित्रण गर्दछ। मूर्तिकलाहरूको यो समूह क्वेनाग ब्रिजमा अवस्थित छ, फुलर्टन होटेलबाट टाढा छैन।
मिनियापोलिस मूर्तिकला बगैंचामा "चम्चा र चेरी" बगैंचामा एक सुन्दर र चंचल डिजाइन हो, र यो काला चेरी डाँठको दुई छेउमा सजीलै प्रतिबिम्बित हुन्छ। चेरीलाई सँधै सुन्दर प्रभाव राख्नको लागि मूर्तिकारले यसलाई पानीको स्प्रे समारोह दियो।